प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द,कसरी प्रयोग गर्ने? |
August 19, 2021 August 19, 2021 adminLeaveaComment on प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द,कसरी प्रयोग गर्ने?
प्याजले केवल खानालाई मात्र स्वादयुक्त बनाउँदैन प्याजको भोजन अपच तथा खाना नरुच्ने जस्ता समस्याको समाधानमा पनि कामयावी हुन्छ । आहार विशेषज्ञ तथा यौन रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार प्याजको सेवनले खानामा रुची त बढाउँछ नै साथै यसले यौ’निक कमजोरी हटाउन पनि सहयोग गर्छ ।शुखी तथा सन्तुष्ट वैवाहिक जिवनका लागि शं’म्भोग शक्ति प्रवल हुन आवश्यक हुन्छ र यसका लागि प्याज एक अचूक उपाय बन्न सक्ने बताइएको छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार यौ’न शक्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्याज एक सस्तो तथा सुलभ विकल्प हो ।
प्याजका फाइदा : सेता प्याजको रस, अदुवाको रस, शुद्ध मह र घिउ ५–५ ग्राम मिलाएर हरेक बिहान सेवन गर्नुहोस् । एक महिनासम्मको नियमित सेवनले तपाइँमा यौ’न क्षमता वृद्धि भएको पाउनुहुनेछ ।रातो प्याजको रस र घिउ दुधमा मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नुहोस् । शिघ्रपतनको समस्या भएका हरुका लागि प्याजको प्रयोग निकै लाभदायी हुन्छ। प्याजको रसमा सम्फोको रस मिलाउनुहोस् अनि त्यसमा घिउ र चिनी समेत मिलाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् ।
यसले शिघ्रपतनको समस्या कम गर्नेछ । साथै प्याजको रस र मह मिलाएर नियमित सेवन गर्दा पनि शिघ्रपतनको समस्या कम हुन्छ । मासको दालको पिठो बनाएर त्यसमा प्याजको रसले मोल्नुहोस् र त्यसलाई दूधमा पकाएर नियमित सेवन गर्नुहोस् । यसले तपाइँको यौ’न क्षमतामा वृद्धि गर्ने एक अध्ययन ले देखाएको छ ।महिलाको भन्दा पुरुषमा यौ’न शक्ती कमजोर हुने र छिटै सिथिल हुने भएकाले पनि पुरुषले विभिन्न औषधीहरु प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर त्यो भन्दा प्याजको सेवन धेरै राम्रो हुन विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । प्याजको नियमित सेवनकै कारण यौ’न क्षमता बढेको विज्ञहरुको भनाई छ।
यो जानकारी पनि लिनुहोस्:पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ ? खानुहोस् यो बिरुवाको पात, १० मिनेटमै मिल्छ राहत।आजको समयमा गलत खानपानको कारण धेरै मानिसहरुलाई ग्यास सम्बन्धित समस्या हुने गर्दछ । यसले गर्दा मानसिहरुलाई अनेकथरी समस्याको हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।आज हामी तपाईलाई यसैसँग सम्बन्धित कुराहरुको बारेमा जानकारी दिनै छौँ । एउटा यस्तो पात चबाउनुहोस् जसले १० मिनेटमा नै तपाईको पेटमा भएको ग्यासलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । र तपाईको यो समस्या पनि टाढा हुनेछ।
पत्थरचट्टाको बिरुवा-आयुर्वेदमा पत्थरचट्टालाई भष्मपथरी,पाषणभेद र पणपुट्टीस्को नामले पनि चिनिने गरिन्छ । भने मोडिकल साइन्समा यसलाई bryophyllum pinnatum पनि भन्ने गरिन्छ ।यो बिरुवा मानिसको स्वास्थयको लागी अधिक लाभकारी छ । यसले ग्यासको समस्यालाई जरैदेखी निमूर्ल पार्दछ । यस बिरुवालाई तपाईले आफ्नो घरको गमलामा पनि लाउन सक्नुहुनेछ । र यसको सेवन पनि गर्नसक्नुहुनेछ ।
१. यदि तपाईलाई ग्यासको समूया छ भने तब तपाई बिहानको समयमा यसको एउटा पातलाई चबाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा ग्यासको समस्या हुनेछैन । यदि तपाईको पेटमा ग्यास समस्या कहिल्यै हटेकै छैन भने पनि यो खाएपछि तुरुन्त ग्यास समस्या हट्नेछ ।२.आयुर्वेदको अनुसार यसमा कैयौँ औषधीय गुणहरु मिल्दछन् । र यसले किड्निमा भएको पत्थरीको समस्यालाई पनि समाप्त गर्न मदत गर्छ ।३.तपाईलाई थाहा छैन होला कि पत्थरचट्टामा सुठो मिलाएर सेवन गर्नाले पेटमा भएको दुखाईबाट राहत मिल्दछ । यसले पेटको दुखाई कम हुन्छ
बिहेको पहिलो रातमै यस्तो भएपछी भयो बैबाहिक सम्बन्ध नै बार्बाद
जति औषधी गर्दा पनि नहटेका अनुहारको दाग र चाया-पोतो सजिलो संगै यसरी हटाउनुहोस(घरेलु उपाय)
दांत र गिजाका कारण मुख गनायो भन्ने सोच्नु भएको छ भने भ्रममा हुनुहुन्छ।यस्ता भित्री खतरनाक रोगको शिकार हुदै हुनुहुन्छ,नछुटाई बेलैमा पढ्नुहोस।